मेरो प्यारो दुल्लु | Jwala Sandesh
मेरो प्यारो दुल्लु
लक्षमण कुमार कार्की | प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ ७, २०७८ ::: 460 पटक पढिएको |
दैलेख जिल्ला नेपालको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने एक मध्यपहाडी जिल्ला हो । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत उपत्यकादेखि ६५ किमिको दुरीमा दैलेख जिल्लाको सदरमुकाम रहेको छ । दैलेखलाई छाला र ज्वालाको हिसावले प्रशिद्ध जिल्ला भनेर चिनिन्छ । राज्यको पुन संरचनापछि दैलेख जिल्लालाई ४ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकामा विभाजन गरिएको छ । त्यसमध्येको एक हो, दुल्लु नगरपालिका ।
दुल्लु बाईसे चौबिसे राज्यको शितकालिन राजधानी रहेको एतिहासिक नगरपालिका हो । दुल्लु नगरपालिकामा साबिकका गाविसहरु नेपा, नाउले, दुल्लु, पादुका, गमौडी, छिउडी, मालिका, र गौरी समेटिएका छन् । नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल १५६.७७ किमि रहेको छ भने कुल जनसंख्या ४१५४० रहेको छ ।
मेरो प्यारो दुल्लु नगरपालिका, दैलेख जिल्लाका व्यापारिक केन्द्रहरु मध्ये एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र पनि हो । नगरपालिकाभित्र पानी माथी दिप ज्वाला बल्ने पञ्चकोशी तिर्थ स्थलका नामले परिचित श्रीस्थान, नाबिस्थान, पादुका, धुलेश्वर, जस्ता क्षेत्रहरु पर्दछन । श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुका, लगाएतका क्षेत्रमा सयौ बर्ष देखि ज्वालाका रुपमा पेट्रोलियम खेर गईरहेको छ ।
उक्त क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् कार्य प्रारम्भ भईसकेकोछ । भौगोलिक रुपमा विकट भएतापनी यहाँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले उच्च सम्भावना छ । प्राकृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको मेरो दुल्लु धार्मिक र प्राकृतिक तथा जलसम्पदामा पनि धनी रहेको छ ।
यस नगरपालिकामा सडक बाटो, पुल पुलेसा, मठ मन्दिर, देवल, होटेल, लज, र व्यापारिक, केन्द्रहरु निर्माणको गति तिब्र छ । सामाजिक सञ्जालको दुनियाँबाट संसार हेरिसके पछि र देखिसकेपछि घरको आगनबाट मेरो प्यारो दुल्लु नगर हेर्न मन लाग्छ । केही समय अघिमात्र नगरका विभिन्न वडामा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेहरुलाई सम्झन्छु अनि आगोको मुस्लो जस्तो पेट मडारिदै घाँटीसम्म आउँछ । आँखा धमिला धमिला हुन्छन् । आँखा सफा गर्न खोज्छु तर झसङ्ग हुन्छु । तपतपी आँखाबाट आँसु झर्दछन् । झिमिक झिमिक गरि आँखा सफा गर्छु अनी मेरो प्यारो दुल्लु नगर हेर्न खोज्दछु । आहा कति सुन्दर नगर जताततै आहा देख्छु ।
सामाजिक सञ्जालमा पहिला–पहिला वाहा वाहा गर्ने, आहा कति राम्रो नगर दुल्लु भन्ने आवाज आउँथे । तर हिजो आज देख्दैछु र सुन्दैछु, कस्तो दुल्लु के बनाए ? किन यस्तो भयो ? घ्यारघ्यार आवाजसंगै पिर पोखी रहेको मात्र देख्छु । मेरो प्यारो दुल्लुलाई घेरी रहेको देख्छु । केही भन्न पनि सक्दिन् । सबैले चौतर्फी स्थानीय सरकारलाई मात्र दोष लगाई रहेको देख्छु अनि सोच्छु यदि म स्थानीय सरकार प्रमुख भएको भए के हुन्थ्यो होला ? विश्वव्यापी फैलिएको महामारी आफ्नै अगाडी आएर छमछम नाची रहेको भए के गर्थे होला ? हुनत म पनि कुनै न कुनै राजनितीक पार्टीको आस्थावान हुँला ।
बेला–बेला राजनितिक पार्टी जोडेर नानाथरी गफ लगाएर चोक चोकमा नगए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर मन कहाँ मान्छ र नगर प्रमुखलाई कामको जिम्मा लगाएका छौ । अनुगमन गरेका छौ । जनताका गुनासा जान्ने सुन्ने र समाधान गर्ने बेला सबै बिर्सेर बस्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिन । अहिलेसम्म अवस्था सन्तोषजनक छ । जनता जिम्मेवार छन् । तसर्थ हामी भाग्यमानी पनि छौ ।
मेरो प्यारो दुल्लु त्यस्तो स्थान हुनेछ, जहाँ सबै समान र स्वतन्त्र हुनेछन् । सबैले आफ्नो वास्तविक धारणा राख्न पाउनेछन् । यहाँमा जातजाती, भाषा धर्म, लिङ्ग सामाजिक वा आर्थिक स्थितिमा कुनै भेदभाव हुने छैन । हुनत यहाँ धेरै शिक्षित मानिसहरु छन तर विभिन्न कारणले गर्दा उनिहरु मर्यादा कमाउन असक्षम छन् । स्थानिय सरकारले शिक्षा प्रबर्द्धन गर्न धेरै पहल गरेको छ तर यहाँका प्राय मानिसहरुले यसको महत्व महसुस गर्दैनन् ।
मेरो प्यारो दुल्लु त्यस्तो हुनेछ जहाँ सबैका लागि शिक्षा अनिवार्य हुनेछ । देशमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र स्थापनापछि स्वतन्त्रता आएपनी मेरो प्यारो नगर जाती धर्मबाट पुर्ण स्वतन्त्र हुन सकेको छैन् । नगरमा तल्लो वर्गका मानिसहरु आधारभुत अधिकारबाट बन्चित भएका छन् । यहि कुरा लाजमर्दो भएको छ । यद्यपी यहाँ विभिन्न सामाजिक समुहहरु रहेका छन् । जसले आफ्ना अधिकारका लागि बोलिरहन्छन् । तथापी म मेरो प्यारो दुल्लु देख्छु जहाँ कुनै पनि प्रकारको भेदभाव हुँदैन ।
प्रयाप्त बिकास गर्न त्यँहा धेरै सामाजिक, धार्मिक र राजनितीक समस्याहरु छन् । तिनी समस्याबाट छुटकरा पाएपछि मात्र मेरो प्यारो दुल्लुको बारेमा सोच्न सक्नेछु । अन्तत मेरो प्यारो दुल्लु नेपालको एक त्यस्तो नगरपालिका बन्ने छ जहाँ हरेक नागरिकहरुले समानता भएको महसुस गर्नेछन् । कुनै प्रकारको भेदभाव हुनेछैन् । फरक–फरक राजनीतिक पार्टीका आस्थावानहरुलाई समान रुपमा हेरिनेछ र सम्मान गरिनेछ । मेरो प्यारो दुल्लु ।
मैले सुनेको र देखेको पलाँता
3 Comments on मेरो प्यारो दुल्लु
ओ // August 24, 2021 at 9:53 am // Reply
Karki // August 24, 2021 at 11:05 am // Reply
Laxman // August 25, 2021 at 9:41 am // Reply
Mero pyaaro dullu